आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना ! - Yatra Daily
Home समाचार आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना !
आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना !
काठमाडौं १६ असार । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखले आज पनि मुलुकका केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हुँदा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
Previous articleकोरोना महामारीको अझै खराब अवस्था आउने डब्ल्युएचओको चेतावनी
Next articleसरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कम